Momba anay - Jereo ny rapport
Mahaliana antsika ireo famantaranandro sy firavaka. Manentana antsika ireo mafana fo.
Jereo bebe kokoa momba ny Watch Rapport
Fantatray fa tsy hisy ny orinasanay raha tsy misy mpankafy fiambenana sy firavaka. Saingy tsy vitan'ny hoe mankafy famantaranandro avo lenta sy ireo mpankafy azy isika. Ny fahasarotan'ny teknolojia fampahalalana sy ny fanamby eo amin'ny tsena manerantany dia mandrisika antsika ihany koa hanosika ny tenantsika handeha isan'andro isan'andro.
Ny tombontsoa tsara indrindra
Manerantany ny tsena fiambenana lafo vidy. Watch Rapport dia manome fidirana amin'ny tsena mora, azo antoka ary azo antoka amin'ireo mpankafy mijery sy firavaka rehetra.
Misy zavatra mandrisika antsika handroso. Hevitra iray izay arahinay amin'ny dingana rehetra. Ny tanjonay maharitra ho an'ny Watch Rapport.
ZAVATRA MISY & ANJARA
Famantaranandro, firavaka ary Internet - fitambarana mahazatra amin'ny fomban-drazana sy ny haitao avo lenta. Fahafahana tsy manam-petra izay mitaona antsika hanana fahombiazana isan'andro.
Ao amin'ny Watch Rapport, mpivarotra 10,000 mahery avy amin'ny firenena 100 mahery no manolotra vokatra mihoatra ny 650,000.
Vokatra avy amin'ny firenena 100 mahery
Plus mpitsidika tsy manam-paharoa isam-bolana
Inona no mampiavaka antsika? Kolontsaina orinasa manome aingam-panahy, ekipa mpitantana efa za-draharaha, ary toe-tsaina ekipa mifindra ao amin'ny tarika misy anay.
Ny tanjonay dia ny hitondra fahatokisana sy mangarahara amin'ny tsenan'ny famantaranandro sy firavaka manerantany.
Ny ekipa mpitantana anay dia mitondra traikefa an-taonany maro eo amin'ny sehatry ny tsena amin'ny Internet.
Tsy manam-paharoa ny singa tsirairay ao aminay, saingy mizara zavatra iray izy rehetra: ny olona izay liana amin'ny asany.